China igqunyiwe Box Liner mveliso kunye nabathengisi | Huizhou
Unokusebenzisa i-CooLiner ibhokisi yokuhambisa engafakwanga ngokuthumela izinto zokutya ezinokonakala, amayeza, iimveliso zobisi, kunye nazo naziphi na iimveliso ezinobushushu.
Aluminium ngefoyile ye Bag / xa igqunyiwe Thermal Bag
I-CooLiner foil iibhegi zeblue ezingafunekiyo ziyacetyiswa ukukhusela iifriji, ukuthunyelwa okuphakathi kweekhathoni ngokuchasene namaqondo obushushu aphezulu kakhulu ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-24. Xa isetyenziswa kunye nebhokisi yokuthumela enamazinki, isiqwenga esinye seCooLiner senza ibhokisi esebenzayo yokuhambisa izinto efikayo efika isongelwe kwifomathi ehambelanayo yothutho lwexabiso eliphantsi kunye nokugcinwa.
Ukwazi ukuba iimveliso zakho ezibuthathaka kubushushu zikhuselekile kubushushu obugqithisileyo kuyo yonke inkqubo yokusasaza ingqele ikunika ukuzithemba kokuthumela iimpahla zakho kulo naliphi na ixesha lonyaka, nakweyiphi na indawo. Ukuhambisa ngenqanawe eyiyo ye-3D yokugquma kuthetha ukuba 'ukulahleka kwemveliso' kuncinci kakhulu kwinkxalabo.
Sisebenzisa itekhnoloji efanayo yokuyila ifunyenwe kwiingubo zethu ze-foil-bubble iingubo ezishushu kunye nezembozo zepallet, iibhokisi zethu ezifakwe kwiibhokisi ezikhutshiweyo zisebenzisa amandla ombane wokuhambisa iimveliso zakho kulo lonke ixesha lokuhambisa.
I-liner yebhokisi ekhutshiweyo yenzelwe inkqubo yokuhambisa ngenqanawa ebandayo. Njengoko igama litshilo, lisebenza njengesithintelo esikhuselweyo kwihlabathi langaphandle kunye nesikhongozeli sokubamba iimveliso ezinobuzaza ngexesha lokuhamba kwekhonkco ebandayo ukugcina ubushushu obungaguqukiyo.
2.Huizhou xa igqunyiwe ibhokisi nqanawa iqulathe EPE pearl umqhaphu kunye ngefoyile ye-aluminiyam. Ngezi zinto zimbini, i-insured box liner inokusebenza njengomqamelo wokukhusela izinto zakho kunye nefoyile ye-aluminium yesilivere inokubonakalisa ubushushu obuqaqambileyo, ngaphezulu, ikhangeleka icoceke kakhulu, inokuhamba kakuhle neemveliso zakho zokugqibela.
I-3.EPE Pearl Cotton luhlobo olutsha lwendalo yokupakisha enobuhlobo. Ithambile kwaye ityebile, igqunyiwe, ayinamanzi ukuze bakwazi ukufaka izinto zakho kwilizwe langaphandle kwaye bazikhusele. Ubunzima bayo obulula bunokuxhasa ukuthuthwa ngokulula.
I-liner yebhokisi ekhuselweyo ye-4.Huizhou ingaba yi-2D njengemvulophu yeposi kunye ne-3D njengebhegi yokwenyani.
1.Huizhou xa igqunyiwe ibhokisi nqanawa yenzelwe ukugcina kubanda okanye kushushu ngaphakathi engxoweni ngokugquma kwilizwe langaphandle, ukugcina amaqondo afanayo ngexesha lokuhamba.
I-2 ubukhulu becala zisetyenziselwa ukuhambisa iimveliso ezinqabileyo, ezinokutsha kunye nobushushu, ezinje nge: inyama, ukutya kwaselwandle, iziqhamo nemifuno, ukutya okulungiselelwe, ukutya okungumkhenkce, i-ayisi khrim, itshokholethi, iilekese, iikeyiki, ikhekhe, itshizi, izithambiso, ubisi, kwaye njl
Zenziwe njengesiqhushumbisi somkhuseli kunye ne-insulator ngokuchasene neentlobo ezintathu zokudlulisa ubushushu, ukuhambisa, ukuhambisa iimveliso zakho xa kuthunyelwa.
I-4.I-liner ebhokisini egqunyiweyo ikhangeleka icocekile kwaye icocekile inika imeko ekumgangatho ophezulu kwiimveliso zakho.
Ngefoyile ye evaliweyo
Ngefoyile ye Camera
Ifoyile yeBhola yomoya
Izinto 1.New lokusingqongileyo, izinto grade ukutya.
I-2.Block radiation, ukuhanjiswa kunye nokuqhutywa.
3.Ziye zambathiswa, zivuza-zixhathise kwaye zingangeni manzi, kwaye zijongeka zicocekile, zihamba kakuhle neemveliso zakho kwaye zihlala zomile ngexesha lokuhamba ..
4.Collapsible yokonga indawo, kwaye inobunzima bokukhanya ukwenza ukuba kube lula ukuhambisa kwaye ikuvumela ukuba ugcine kwiindleko zokugcina.
Ubungakanani 5.Customized kunye noshicilelo kwi ngefoyile ye.
6.Ihambelana nepakethe yejeli yejeli.
7.Iinjongo ezininzi kunye nokuphinda kusetyenziswe kwakhona.
1.Ingxowa ingaba yi-2D njengemvulophu okanye i-3D njengengxowa. Umthengi wethu angazisebenzisa njenge-imeyile ukubamba izinto ngokuthe ngqo okanye kwi-liner ukuze isetyenziswe nebhokisi yebhokisi okanye enye iphakheji.
Olu luyilo lokonga indawo lulungele ukusetyenziswa kwangoko ngaphakathi kwebhokisi yekhadibhodi esemgangathweni. Zingasetyenziswa ngokudibeneyo neepakethe zejeli okanye umkhenkce owomileyo xa kuthunyelwa iimveliso ezifuna ukugcinwa kubushushu obucwangcisiweyo ixesha elide.
3.Sineendlela ezininzi zokwenza i-aluminium foil kunye ne-EPE kunye netekhnoloji eyahlukeneyo kunye nokuqhubekeka, njengokutywinwa kobushushu, ifilimu egutyungelweyo kunye nefoyile yomoya.
Egqithileyo Ingxowa yeThermal
Okulandelayo: Ipakethe ebandayo yangoku